Indawo yokuhlala yeqela elikhulu enombono
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSophia（索菲亚）
Kutshanje ihlaziywe kwaye inikezelwe kumxholo wesitayile selizwe, sifuna iindwendwe zethu zive ngathi zisekhaya, nokuba uhambo lwakho lukuzisela kude kangakanani!
Zijonge ngokwakho kule ndlu yeholide ebanzi enemibono ye-balcony! Eli khaya lonyulwe ngokungaqhelekanga linemigangatho emi-3 lilungele amaqela amakhulu, lihlala ngokukhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-15.
Uyilo olwahlukileyo luvumela iintsapho ezininzi ukuba zihlale kunye nendawo yazo. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi okulala ama-3, umgangatho wesibini amagumbi okulala ama-2, kunye negumbi lokulala elikhulu kumgangatho wesithathu. Wonke umgangatho uneendawo zawo zokuhlambela kunye nebalcony. Igumbi lokutyela, igumbi lokuphumla kunye nekhitshi elinobungakanani obugcweleyo obunikezelwe ngezinto zokupheka zinokufunyanwa kumgangatho wesibini. Iintsapho nabahlobo banokuhlala kunye ngokukhululekileyo benendawo eninzi ekwabelwana ngayo kunye nendawo yobuqu.
Iinkqubo ezimbini ezahlukeneyo zamanzi ashushu zisetyenziswa kule ndlu. Umgangatho wokuqala kukufudumeza kwegesi, okwesibini kunye nokwesithathu ngombane, siqinisekisa ukuba iindwendwe zethu ziya kufumana amanzi ashushu ngamaxesha onke.
4.95 · Izimvo eziyi-81
Igama lesitrato elithi "McCahil Views" alinakuchaza ngcono le ndlu! IMcCahill Views ikwindawo ezolileyo, ekhuselekileyo nephucukileyo. Izindlu kwesi sitrato zakhiwe kwindawo ephakamileyo kwaye njengegama layo, ivumela iimbono eziphefumlayo.
Ipaki ekufutshane ikulungele ukufota iifoto okanye ukonwabele nje ukuphuma kwelanga / ukutshona kwelanga kunye nembono yesixeko. Kule ndawo uya kufumana indawo yokuthenga eHighland Park, indawo enkulu yokutyela, iHowick Historical Village, iPakuranga Golf Club, iziko loLonwabo, apho kukho amachibi okuqubha, i-badminton, i-sauna kunye nezinye izinto ezininzi. Ukuba unqwenela ukukhuphisana ngamava okuthenga, ungaphantsi kwemizuzu eli-10 ukuya kwiZiko leDolophu yaseBotany, eliqhayisa ngoluhlu olukhulu lwefashoni, impahla kunye neevenkile ezizodwa, kunye nazo zonke iivenkile ezidumileyo 'zebhokisi enkulu', iithiyetha bhanyabhanya kunye iindawo zokutyela. I-Eastern Beach, iBucklands Beach, iHalf Moon Bay kunye neMusik Point yimizuzu eli-10 yokuqhuba kwaye inika iimbono ezintle kwiHauraki Gulf, uhambo oluhle kunye nokukhwela isikhitshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Sophia（索菲亚）
Ndikhetha ukunika iindwendwe zam indawo kodwa ndifumaneka ngolonwabo ukuba kukho naluphi na uncedo okanye iingcebiso zokuhamba ezifunekayo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$306
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Auckland